‘जनप्रतिनिधी विहिन बनाउन पाइदैन’ भन्दै टिकापुरका युवा आन्दाेलित:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
नयाँ मिडिया, टिकापुर
मङ्ल, साउन १३, २०७७ (July 28, 2020, 9:14 am) मा प्रकाशित
'यस क्षेत्रका सांसद रेशम चाैधरी जेलमा छन तर न उपनिर्वाचन भयाे न उनी रिहा भए'
कैलालीकाे क्षेत्र नं- १ जनप्रतिनिधी विहिन भएकाे भन्दै कैलालीकाे टिकापुरमा युवाहरूले आन्दाेलन सुरू गरेकाछन । हाम्राे जनप्रतिनिधी खाेइ ?, जनप्रतिनिधी विहिन बनाउन पाइदैन, टिकापुरकाे विकाश खाेइ ?, निर्दाेश भए रिहा गर, कि उप निर्वाचन गर लगायत लेखिएका प्लेकार्ड र नारा लगाउदै युवाहरू सडक आन्दाेलनमा उत्रिएका हुन ।
साेमबार स्वस्फुर्त उपस्थित युवाहरूले टिकापुरकाे बसपार्कबाट र्याली सुरू गरेका थिए । खडक चाेकमा पुगेर काेण सभामा परिणत भइ कार्यक्रम सकिएकाे थियाे । सभामा युवाहरू गणेश वली, लाेक ब. बुढा, अनुज हमाल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । वक्ताहरूले क्षेत्र नं- १ विगत तिन बर्ष देखी जनप्रतिनिधी विहिन रहेकाे तर सम्बन्धीत कुनै पनि पक्षले चासाे नेदेखाएकाेले युवाहरू सडकमा आउनु परेकाे बताएकाछन ।
‘कैलाली क्षेत्र नं-१ का सांसद रेशम चाैधरी जेलमा छन । तर राज्यले न उपनिर्वाचन गर्याे न उनकाे रिहाइ गर्याे । पार्टी र नेताहरू आफ्नाे सहजता हेर्दै चुपचाप छन तर जनता जनप्रतिनिधी विहिन बनाइएकाे छ ।’ युवा गणेश वलीले भने ।
‘सांसद नहुदा विकाशमा बाधा भयाे, टिकापुरका कुरा संसदमा कस्ले सुनाइदिने ? निर्वाचित सांसद जेल गए, उप निर्वाचन गर्नु पर्थ्याे या दाेषी नभए आफ्नाे क्षेत्रमा काम गर्न रिहा हुनुपर्थ्याे । यि दुबै काममा कसैले चासाे नदिदा हामी अन्यायमा परेकाले अधिकार खाेज्न सडकमा आउनु परेकाे अर्का युवा लाेक ब. बुढाले बताए ।
त्यस्तै अर्का युवा अनुज हमालले अव युवा नै अग्रसर नभए सम्म टिकापुरमा विकाश नहुने बताए । राजनितीकर्मी, व्यापारी लगायतले टिकापुरकाे विकाश र जनताकाे अधिकारका लागी चासाे नदिएकाे गुनासाे गरे ।
अधिकारकाे खाेजी गर्ने सुरूवात भएकाे र यसैगरी बाकी बर्षहरू पनि वित्ने स्थिती आए कडा आन्दाेलन गर्ने युवाहरूले चेतावनी दिएकाछन । साथै सम्पुर्ण क्षेत्र नं- १ का जनता, व्यापारी, राजनैतिक दल, बुद्धीजिवीहरू पनि याे विषयमा अग्रसर भइदिन उनीहरूले अनुराेध गरेकाछन ।
जनप्रतिनिधी टिकापुर सडक आन्दाेलन सुदुरपश्चिम
मङ्ल, साउन १३, २०७७ (July 28, 2020, 9:14 am) मा Naya Media द्वारा प्रदेश नं- ७ अन्तर्गत प्रकाशित